YaseYurophu Kuhle Christmas izimakethe ngu zemininingwane | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > YaseYurophu Kuhle Christmas izimakethe ngu zemininingwane
Isikhathi sokufunda: 4 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 24/07/2020)
Christmas izimakethe ngu zemininingwane kukusiza uthole ku umoya kaKhisimusi nge uhambo komunye wemizi engcono yaseYurophu. Izikhangibavakashi ngesitimela futhi wenze isipiliyoni sakho imilingo kunazo zonke ezake! abaningi iziteshi zitholakala enhliziyweni enkabeni yedolobha, okwenza wokujikeleza ngesitimela indlela elula ukuba ufike lapho uya. Kungakhathaliseki uya uyothenga izipho umndeni, lokuphuza i iwayini mulled noma umane ujabulele umoya kaKhisimusi nabantu obathandayo, uqiniseka ukuba abangasoze balukhohlwa iholide. Siye ihlanganiswe ezimbalwa engcono Christmas izimakethe yaseYurophu ngesitimela ukuthi ngeke simphuthele.
Florence, I-Italy ukukhetha kwethu kokuqala kwezimakethe zikaKhisimusi ngesitimela
Esinye sezikhathi imilingo kakhulu onyakeni ukuvakashela Italy ngesikhathi Christmas. Thatha isitimela esiya Florence ubone ezikhumbuzo lasendulo wokhela ngezibani Christmas unuke chestnut yokuwugazinga emoyeni.
Naples ukuze Florence Izitimela
A ethandwa emakethe ukuze vakashela ku Florence kuyinto Piazza Santa Croce e Florence. Lokhu ligcwele nezitebele zamahhashi kuhle lokhuni futhi ngokuba bendabuko market German Christmas eyaziwa. Piazza Santa Croce kuyinto enhle ukuba sithathe izipho eliyingqayizivele futhi izibiliboco zendawo.
Phawula ekuqaleni kwale Izimakethe Christmas by zemininingwane nge uhambo Isitimela London. London ugcwele yimani Christmas kusukela November kuya Januwari. Vakashela yaseLondon eyenza ubusika at Hyde Park ubone izihlahla ehlotshiswe izibani inganekwane, elikhulu Ukushushuluza ongaphandle rink, isondo Ferris, carol singers and kakhulu ngaphakathi emakethe. Kukhona izimakethe eziningi ezincane ukukhetha kusuka National Umlando yaseLondon Indawo egcina amagugu esizwe lapho ungagcina kufudumele omnandi ebusika emoyeni nge ingilazi glühwein futhi abanye ukudla samaholide. plus, nge fantastic ezitimeleni zamanani ehlisiwe eLondon, kuzodingeka imali ethile eyengeziwe bethenga ngaphezulu!
Izikhangibavakashi ukuze enchanted Christmas izimakethe ngesitimela!! Berlin kalula nge isitimela e-Europe okwenza kube le ephelele uya khona. Thola umlando inhlokodolobha German sika ocebile futhi othakazelisayo, kanye ahlukahlukene izimakethe zabo zikaKhisimusi, ngezisusa ezithile zonyaka yezitolo, imicimbi kanye okujabulisa Culinary!
Gendarmenmarkt iyisikhungo kumele ubone! Lokhu isethaphu yaziwa njengenye omunye olunothile iningi izimakethe kaKhisimusi Berlin sika. Taste ezinye awukudla zendawo ezifana Gingerbread, chestnut okugazingiwe, mulled iwayini futhi ayi ngoba ultimate isipiliyoni Christmas German.
ePrague, I-Czech Republic
Ngokungafani ezinye izimakethe ezinkulu eYurophu, Izimakethe zikaKhisimusi zasePrague ngeSitimela zinikeza ubuqiniso obuningi nenduduzo. emakethe ngamunye has isimo ongenakulibaleka. Amaminithi kude central Isiteshi sesitimela kuthiwa ngokukhazimulayo ehlotshisiwe maqhugwane lokhuni olukulesi lasePrague Old Town isikwele. Lapha bendawo nezivakashi nibuthane Stocking fillers, amathoyizi lokhuni, Isihlahla sikaKhisimusi imihlobiso, ubucwebe ezenziwe ngesandla, futhi olunephunga elimnandi amakhandlela.
Kukhethwa ukudla kanye iziphuzo ithengiswe emakethe ophana kakhulu. Izivakashi bangabheka phambili ukudla Czech bendabuko njengoba yengulube eyosiwe, Muffin Czech, conkers, ubhiya, Mull, kanye nezinye amakhono ejwayelekile kusukela Old cuisine Czech. Kukhona okuthile okukhetheke kakhulu mayelana emakethe Christmas ePrague. Silandele ku Twitter futhi Facebook ukugcina iso out for izipesheli zethu zamuva.
Vienna, I-Austria yizimakethe zethu zokugcina zikaKhisimusi ngeTrain city
Jabulela ikhefu ledolobha ngesitimela ukuya emikhosini eVienna! Vienna lingumuzi ISIFISO futhi romance futhi inikeza engcono kakhulu Christmas izimakethe e-Europe. I esiteshini sesitimela kuba imizuzu kuphela ithekisi nobe ibhasi kusukela enkabeni yedolobha okwenza Vienna sika Christmas izimakethe ngu zemininingwane lula ukufinyelela. Ethandwa kakhulu emakethe kule dolobha lwenzeka Rathausplatz, lapho square okwanele izibani twinkling futhi nomuthi walo umbukwane Christmas.
Zama Punch okumnandi futhi amaswidi bendabuko njengoba ubuka kusukela Itafula sekumiswe isipho imihlobiso, futhi njalo kusihlwa icilongo bukhoma amakhonsathi lwenziwa kusukela Rathaus kuvulandi, lokhu kuyindlela enhle kakhulu ukuqeda usuku ephelele.
Yenza le eyodwa Christmas ukukhumbula nge Ukuvakashela kwelinye okungavamile izimakethe kaKhisimusi yaseYurophu ngesitimela. Bhuka ithikithi lakho inthanethi usebenzisa yokugibela yethu othole futhi wenze savings okukhulu kusengaphambili.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-christmas-markets-by-train/ - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
#emakethe #unyaka omusha #noel Christmas ChristmasbyTrain